INkundla Ephakamileyo YaseRashiya—Amangqina-KaYehova Ehlabathini-Lonke Ayabaxhasa
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba
Ifoto yabazalwana ebebethunyelwe eRashiya ukusuka ekhohlo ukusa ekunene: UAlberto Rovira (waseSpeyin), uPeter Hamadej (waseSlovakia), uAndrejs Gevla (waseLatvia), uChung Ho (waseKorea), uYaroslav Sivulskiy (waseRashiya), uJohann Zimmermann (waseOstreliya), uStefan Steiner (waseSwitzerland), uVasiliy Kalin (waseRashiya), uTommi Kauko (waseFinland), uMark Sanderson (waseMerika), Robert Delahaije (waseNetherlands), uMarc Hansen (waseBelgium), uPaul Gillies (waseUnited Kingdom), uLars-Erik Eriksson (waseSweden), uTommy Jensen (waseDenmark), uJørgen Pedersen (waseNorway), uManfred Steffensdorfer (waseJamani), uTeemu Konsti (waseLithuania), uBabis Andreopoulos (waseGrisi), uTambet Ernits (wase-Estonia), uJean-Claude Pons (waseFransi)
JULAYI 21, 2017
Abazalwana Abasuka Kumazwe Ahlukahlukeneyo Baxhase Abazalwana BaseRashiya KwiNkundla Ephakamileyo
ENEW YORK—IQumrhu Elilawulayo lamaNgqina KaYehova lilungiselele abazalwana abasuka kumazwe amathathu ukuba baye eMoscow ukuya kuxhasa abazalwana noodade baseRashiya.
Xa aba bazalwana bafikayo eMoscow, bamkelwa ngobubele nangothando ngabazalwana noodade baseRashiya, abanye kwaba bazalwana babesuka eSiberia. Babaqinisekisa abazalwana noodade baseRashiya indlela ababaxhalabele ngayo nokuba bayathandazelwa ngamanye amaNgqina ehlabathini lonke. Omnye kwaba bazalwana basuka kwamanye amazwe uthe: “Ndichukunyiswe yindlela ebebenesibindi ngayo abazalwana baseRashiya, nangona bebesazi ukuba isigqibo esingabavumeliyo ukuba bakhonze asizokutshintshwa.”
Nangona iijaji ezintathu zivumelene nesigqibo sokungawavumeli amaNgqina akhonze eRashiya, abazalwana bebebonakala bethandana yaye bemanyene enkundleni. Bekubuhlungu kakhulu ukuva igama likaYehova lirhuqelwa eludakeni phambi kukawonke-wonke nokwazi ukuba kungekudala amaNgqina aza kutshutshiswa eRashiya. Sekunjalo, ukuzola nothando oluboniswe ngabazalwana noodade enkundleni, lubonise phandle ukuba ezi zityholo zide zaxhaswa naziijaji zokuba benza imisebenzi eyingozi azivakali.
Aba bazalwana basuka kwamanye amazwe bebekhokelwa lilungu leQumrhu Elilawulayo uMark Sanderson. Ukhuthaze amaNgqina aseRashiya ukuba ‘omelele aze abe nesibindi,’ kwiintsuku ezizayo. Njengoko babephuma enkundleni, abazalwana basekuhlaleni babanga baza bababulela ngenkxaso yabo kwesi siganeko siyimbali.
Aba bazalwana basuka kwamanye amazwe baya nakwiiofisi zoonozakuzazaku ukuze babaxelele ngokuhlaselwa kwamaNgqina KaYehova ngurhulumente waseRashiya. Oku kuquka ukutshiswa kwezindlu zamaNgqina, ukuphelelwa ngumsebenzi, ulwaphulo-mthetho olwenziwa kubadala abaninzi ngenxa yokuba belungiselela iinkonzo nokuvalelwa kukaMzalwan’ uDennis Christensen entolongweni. Oonozakuzaku abaninzi bachukunyiswe yividiyo yemizuzu emibini eshwankathela ezi ziganeko. Oyena mbuzo ububuzwa ngabasemagunyeni ubusithi, ‘Kutheni le nto isenzeka kumaNgqina KaYehova?’ Xa bebephendula abazalwana baye bacacisa ukuba amaNgqina akathathi cala kwizinto zepolitiki ibe umsebenzi wethu wokushumayela utshintshe ubomi babantu abaninzi baseRashiya. Omnye unozakuzaku uthe: “ICawa yobuOthodoki ayinithandi kuba nithatha amarhamente ayo.” Abangaphezu kwabayi-10 bathumele abammeli babo ukuba baye enkundleni ngoxa bekuqhubeka isibheno ibe baye bahlala apho iiyure ezisibhozo.
Aba bazalwana babuye bekhuthazekile eRashiya, besomelezwa yindlela abazalwana baseRashiya abazimisele ngayo ukungagungqi nayindlela abanikela ngayo ubungqina kwabasemagunyeni.